Goldsmith may Cry | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Arts & Humanities » Goldsmith may Cry	11
Goldsmith may Cry
Posted by ムラカミ on Jul 1, 2015 in Arts & Humanities, Know-How, DIY, Photography | 11 comments
မက်ခရို အကြောင်း ပြောကြ ဆိုကြ ရင်း..။
DIY တခု ဖောက်သည်ချရင်း ဆိုပါတော့…
တခြားမဟုတ်ပါဘူး … lighting technique နဲ့ ပါတ်သတ်ပြီးတော့ပါ…. ဘာမဟုတ်တဲ့ အိမ်သုံးလက်နှိပ်ဓာတ်မီးပဲဖြစ်ဖြစ်
ဖုန်းမှာပါတဲ့ မီးပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့.. ။ (တခြား photography တွေထက်) macro photography မှာ ဘယ်လိုသုံးလို့ရတယ် ဆိုတာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့ပါ..။
ကျနော်လည်း macro ကို lighting အမျိုးမျိုး နဲ့ စမ်းခဲ့ ..စမ်းနေ စမြဲပါ…။
ခုလည်း နည်းနည်း ထပ် စမ်းထားပါတယ်။
ဒီတခါကတော့ ပန်းထိမ်ငိုတွေပါ…။ (တချို့ အရပ်မှာလည်း ပန်းထိမ်မနိုင် လို့ ခေါ်တတ်သေးတယ်တဲ့ဗျ)
ထားပါတော့ လေ ပြောလိုရင်းက နာမည်မဟုတ်ပါဘူး …။ ဓာတ်ပုံအကြောင်းပါ။
နှင်းဆီ လို စံပယ်လို ခပ်ဝိုင်းဝိုင်း သဏ္ဍာန်ရှိတဲ့ ပန်းတွေလိုမဟုတ်ဘဲ အခိုင်လိုက် တွဲကျနေတဲ့ ပန်းမို့
နည်းနည်းတော့ ချဉ်းကပ်ရပုံ ကွာသဗျ…
ဒါဆို portrait ပုံစံ ဒေါင်လိုက်ပဲ ရိုက်ရမလား…
ဘာလေးပဲ ကွက်ပြမှာလဲ … နည်းနည်းတော့ အုံးစားသဗျ..
ဒီပုံက ညာဘက်အောက် ခပ်ယွန်းယွန်းကနေ အလင်းရောင်ပေးထားတဲ့ ပုံဗျ.
ပန်းပွင့်တွေပေါ်က အရိပ်နဲ့ ဘယ်ဘက်ခြမ်း မှောင်နေတာကို ကြည့်ရင် သိသာပါတယ်ဗျာ။
နောက်ခံကတော့ အထွေအထူး မဟုတ်ပါဘူး .. ပန်းတွေရဲ့ နောက်ဘက် ၃ပေလောက် အကွာမှာ ရှိတဲ့ စားပွဲတလုံးရဲ့ စားပွဲခင်းပါပဲ။
ဒါကတော့ ဘယ်ဘက် အပေါ်ခြမ်းကနေ အလင်းပေးထားတာဗျ။
ဘေးတိုက်တည့်တည့်မဟုတ်ဘဲ (နောက်ကနေ ရှေ့ကို) ဒီဂရီ စောင်းထားတာမို့
နောက်ခံ BG ဆီကို အလင်းမရောက်တာ မြင်ရမှာပါ
ရိုက်တာကတော့ သိပ်ထူးထူးဆန်းဆန်း မဟုတ်လှပါ။
သည်ပုံက ဘယ်ဘက် အောက်ထောင့်ကနေ အလင်းပေးထားတာဗျ…။
ပန်းပွင့်တွေ နောက်ကနေ ရှေ့ကို ခပ်ငိုက်ငိုက် ငေါထွက်ေ်နတာနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်အပြိုင်
မီးကို အောက်ကနေအပေါ် ခပ်စောင်းစောင်း ပေးထားပါတယ်။
ပန်းခိုင်တခုလုံး မဟုတ်ဘဲ ထိပ်ဆုံးက တပွင့်တည်းကို အနီးကပ် ဖြတ်ရိုက်ကြည့်ထားတာပါ။
ဘယ်ရော ညာမှာပါ အလင်းပေးထားတယ်ဗျ။
ဘယ်ဘက်က ဖြည့်စွက်ထားတာဖြစ်ပြီး ညာဘက်ကတော့ မီးချောင်းက အလင်းရောင်ဗျ
နောက်ခံ ဖွေးသွားတာကတော့ ပန်းအိုးကို မီးနဲ့ angle စောင်းထားတာမို့
မီးကို နောက်ခံထားသလို ဖြစ်လို့ပါ။
သည်ပုံက အလင်းပေးပုံနဲ့ ပါတ်သတ်ပြီး ထူးထူးခြားခြား ပြောဖို့ မရှိပါဘူး။
landscape ပုံစံ ဒေါင်လိုက်ရိုက်ကြည့်မယ် စိတ်ကူးပြီး ပန်းခိုင်ရဲ့ ထိပ်ကို တခြား ပန်းခိုင်တွေ နောက်ခံထထားပြီး ရိုက်လိုက်တာပါ
တခုလေးပဲ သတိထားပြီး နေရာချမိတာက အဆိုပါ ပန်းခိုင်တွေရဲ့ ထိပ်တွေ တတန်းတည်းနီးပါးဖြစ်ဖို့ပါပဲ။
ပုံ၁ နဲ့ ကွာသွားတာက ပုံ၁။မှာက isolation လုပ်ထားတာ
သည်ပုံမှာက အလယ်က ပန်းခိုင်ကို ရှေ့ နဲ့ နောက် ပန်းခိုင်တွေ ညှပ်ပြီး ရိုက်တာ..
တကယ်ဆို မည်းနေတဲ့ BG က ကြမ်းပြင်ဗျ။
natural light ကို ပြတင်းပေါက်ပိတ်ပြီး ကာလိုက်တယ်။
ဘယ်ဘက်အပေါ်ကနေ ပန်းခိုင်ပေါ်ကို မီးပေးတယ်။ မီးနဲ့ ပန်း ၂ပေလောက်ကွာတယ်။
ပန်းခိုင်က ကြမ်းပြင်နဲ့ ၃ပေလောက် ကွာတယ်။
ပန်းပွင့်တွေပဲ လင်းပြီး BG က မှောင်မည်းနေတယ်ပေါ့…။
(Studio Lighting ထဲက တက္ကနစ် တခုအနေနဲ့ စာသံပေသံ ရှင်းမပြတတ်တာ ခွင့်လွှတ်ပါဗျာ)
ရိုးတံအ၀ါ အဖူးတွေနဲ့ ပန်းခိုင်တွေချည်း ရိုက်နေရင်း အပွင့် ပွင့်နေတဲ့ အခိုင်တခုကို တွေ့လို့ ရိုက်ထားတာပါ
သည်အောက်က ၉ နဲ့ ၁၀ ကတော့ နောက် ရက်မှာ ဆက်ရိုက်ထားတဲ့အထဲက ရွေးထည့်ထားတာပါ။
တခြား BG တွေအစား ပင်ကိုယ် ပန်းခိုင်ရဲ့ အရွက်ကို နောက်ခံထားရင် ဘယ်လိုနေမလဲ ဆိုတာကို စမ်းကြည့်ထားတာပါ။
နဂိုလည်း သည်ပန်းရဲ့ အရွက်တွေက အစိမ်းနုရောင်ရှိတာ တကြောင်း ။
အလင်းရောင် တခြမ်းပဲ ပေးပြီး highlight ကို ကစားကြည့်ချင်တာတကြောင်း နဲ့
ဒါကတော့ အလင်းနဲ့ နောက်ခံ ကို ဖွေးထွက်သွားအောင် လုပ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲ
သပ်သပ် နောက်ခံ အဖြူရောင်ခံထားပြီး ရိုက်ကြည့်ထားတာပါ။
တခြား ရိုက်ချင်သေးတဲ့ ပုံစံကွဲတွေ ရှိနေသေးပေမယ့်
လက်တလော ဘုရားကပ်ထားတာမို့… ဘုရားစင်နဲ့ စားပွဲပေါ်လောက် ခုံပေါ်လောက်ကလွဲရင် ချမရိုက်ရဲတာမို့…
(Reflector eff တွေ စမ်းချင်သေးသဗျ)
နောက်များမှ …ပန်းသပ်သပ်ဝယ်ပြီး စိမ်ပြေနပြေ ထိုင်ရိုက်ရင်း မှတ်တမ်းလုပ်ပါဦးမယ်။
Courage says: ကျွန်တော်က အခုမှ ဓါတ်ပုံရိုက်တာကို လက်တည့်စမ်းတုန်းဆိုတော့ ဝေဖန်အကြံပေးတော့ မလုပ်ရေးသေးပါ။
ဒါမဲ့ အခုလို့ ဓါတ်ပုံပညာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး စာအုပ်တွေဖတ် လေ့လာရင် ၁နာရီလောက် ဖတ်ယူရမယ့် ပညာကို ၁၀မိနစ်နဲ့ အပြီးဝေမျှပေးလို့ ကျေးဇူးပါ။
ကျွန်တော်လဲ စမ်းရိုက်ကြည့်လိုက်ဦးမယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12176
Alinsett @ Maung Thura says: ပန်းထိမ်တင်မက ကျနော်ပါ ငိုချင်တယ်
အဲ့လို ရိုက်တတ်ချင်လျက်နဲ့ မရိုက်တတ်လို့
အောင် မိုးသူ says: ပညာတွေယူသွားတယ်
kai says: တလောက.. Popular Photography magazine မှာ.. 3000-lumen LEDလက်နှိပ်ဓာတ်မီး နဲ့.. လူကိုပေါ့ထရိပ်ရိုက်… လေယဉ်ကိုရိုက်လုပ်ပြသွားသဗျ…။
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: Link လေးရရင် လိုချင်သားဗျာ….
diffusers တွေအကြောင်း လေ့လာနေလို့ဗျ…
Ma Ma says: အဲဒီပန်းက လှလည်းလှ ကြာကြာလည်း ခံလို့ သဘောကျတယ်။
ဘုရားပန်းကပ်ရင် တစ်ပတ်လောက်တော့ သာသာလေးပဲ။
တခါတလေ အဲဒီအပင်က အမြစ်တွေတောင် ထွက်တတ်သေးလို့ ပြန်စိုက်လို့တောင်ရတယ်။
ဓာတ်သေတွေတော့ သဘောကျသားးးး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: ဘုရားစင် က ပန်းတောင် မောင်ဂီ့ လက်ထဲ မော်ဒလယ် ဖြစ်ရရှာတယ်။ . မျက်စိ ထဲ အဖြူ အစိမ်း နဲ့ အဝါ ရောင် တွေ မြင်တယ်။
အမြင် မှန်ပါတယ် မဟုတ်လား။
မြစပဲရိုး says: Eagle …. Really … Ha Ha …. :-))))
Mike says: .လှ၏
ဇီဇီခင်ဇော် says: နာ က အစ က ပန်းတိမ်ငို လို့ ဘာလို့ ပေးတုန်းမှတ်တာ။
အဲလောက်လည်း မလှမ ထူးခြားဘူးမှတ်နေတာ။
မက်ခရို ၁ နဲ့ ၄ မှာ သူ့ ဝတ်မှုန်တန် အတွဲအဆက်လေးတွေက ရွှေပန်းတိမ်သမားတွေ တောင် လိုက် မတု နိုင်အောင် နွဲ့ပြီး အနုစိတ်လို့ ဆိုတာ မြင်လိုက်ပြီ။
Ma Ei says: ပန်းပွင့်တွေပဲ လင်းပြီး BG က မှောင်မည်းနေတဲ့7ပုံလေး မျက်စိတွေ့တယ်…
အဖြူ မဟုတ်တဲ့ ပန်းတိမ်ငိုပန်းနီရောင်၊ ခရမ်းရောင် ကိုရော အဲ့လိုတွေရိုက်ရင် ဘယ်လိုမြင်ရမလဲသိချင်သား…